AKWNKWỌ AH RR R PZỌ
Mkpakọrịta na-aga ahịa na-achọ njikwa ngwaahịa, ire ahịa, ire ahịa ahịa, imewe, mmepe, ngalaba na-enweghị atụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nyefee ọrụ ọhụụ.
echiche akụkọ, atụmatụ atụmatụ oge a kara aka, mata nnukwu ọrụ na nghọta doro anya na 'mmeri', kwado mmefu ego ị ga-aga ahịa, asụsụ imepụta, ntinye aka na teknụzụ & nyocha asọmpi, kwado ndị na-ere ahịa na ikike.
Ebumnuche: gosi ma kesaa nkenke, ntinye aka gọọmentị, bido ịhazi ahịa ahịa, mbido mmalite nke usoro imewe, mepụta usoro oru ngo maka ịrụ ọrụ n'ihe gbasara usoro ọnụọgụ, usoro iheomume na akụrụngwa
Planing: amụma mbụ na ịtọ oke
Mmezi na 2D na ngwangwa prototype imewe direction, inyocha 1st n'omume anya prototype ngwá ọrụ, gosi 2D imewe direction.
Mkpebi ịzụ ahịa zuru oke n'ihe metụtara ebumnuche azụmaahịa, usoro ọwa, usoro ihe agba na ọnụahịa.
FMEA, DFM, Ebu eruba analysis, tooling, ule, asambodo, Eserese mmepe, nkwakọ ngwaahịa, n'omume aka-apụ, tooling atụmatụ, pilot ọsọ.
ihe nlere ahia, na nkwadebe n'ichepụta ihe, BOM, stkwụ ụgwọ, SOP, ERP.
Hapụ PO, rụọ ọrụ na ntinye Chain na nnyefe 1st.
Ngwaahịa na ụlọ nkwakọba ihe dị njikere iji ụgbọ mmiri gaa onye ahịa.
Nkọwa atụmatụ atụmatụ dị ka ndị a:
Na-anakọta VOC (olu onye ahịa) iji nweta atụmanya ndị ahịa wee tinye QFD (njirisi ọrụ arụ ọrụ) iji chọpụta njirimara ndị dị mkpa, kpalie echiche ịkọwapụta ya, mezue echiche mmepe site na njikarịcha echiche. 3D ịme ngosi uwe ka ọ dị ugbu a nwere nyocha FMEA na DFM. Nweta nkenke EPS ngwá ọrụ na oghere na-akpụ ngwa ọrụ site na akụrụngwa dị elu gụnyere waya ntanye eletriki eletriki na ọnwụ CNC.
Mepụta mmetụta ụzọ map dị iche iche ọkọlọtọ, ebu liners na kwuru njupụta, jiri calibrated Cadex ule ngwaọrụ ime na-ụlọ ule site nkà lab techinican. Nyochaa ihe nlereanya ọ bụla site na cert a ghọtara nke ọma. ụlọ nyocha
Mee ntuziaka oru na SOP (usoro eji arụ ọrụ) yana njigide nrụpụta akọwapụtara. Mee Usoro njikwa atụmatụ iji hụ ogo dị elu. Jiri nlezianya lee anya site na scrum board, jiri nlezianya soro mmepe site na iji ndepụta OKR, nzukọ nkwụnye kwa ụbọchị na usoro eserese Gantt.
Were ego obula mejuputa oru ngo obula n'oge ya.
Echiche - 2D - Clay
Ntinye aka teknụzụ & nyocha asọmpi.
Mmechi echiche, imepụta ngwaahịa.
Emere maka ngwa oru, ule na ego.
Mmepụta atụmatụ njirimara
N'elu ịme ngosi uwe - Rapid prototype
N'elu ịme ngosi uwe.
Elu àgwà ngwangwa prototyping.
Nyochaa imewe asụsụ.
Nyocha Modex Flow.
Na-ebuli nhazi ngwa ngwa
Imewe maka imepụta ihe, imepụta maka nyocha ọnụ.
Jiri anya nke uche gị hụ usoro ihe eji eme ihe na akara ngosi.
Ihe nlele na ule
Ulo oru nyocha zuru ezu.
Ọma ịghọta ule ardskpụrụ.
Mepụta mmetụta Roadmap na see ule akara.
Nkwado ule nyocha siri ike ma nye nyocha ọkachamara.
Pilot na-agba na mma nyochaa.
Ojuju zuru ezu banyere nnyefe ahia.
Robot nkenke trimming.
Usoro SOP na Usoro Nhazi iji hụ na ọ dị mma
Na nnyefe oge
Nzaghachi ọsọ ọsọ, ọrụ ndị ahịa na-adabere.